मनोरञ्जन Archives | Page 94 of 182 | Nepalese.org - No. 1 News Portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actoress, Audio, Video, Interview
यी बलिउड अभिनेत्रीहरुले अझै पाएनन् ‘ड्रिम ब्बोइ’
बलिउड । बलिउड अभिनेत्री तब्बु ४६ वर्षकी भइन् । उनको जन्म ४ नोभेम्बर १९७१, हैदरबादमा भएको थियो । तब्बुको असली नाम तबस्सुम हाश्मी हो । ८० तथा ९० को दशकी अभिनेत्री फराह नाज उनकी ठुली दिदी हुन्... Read more
पति अभिषेकका कारण चलाउँदिनन् एेश्वर्या फेसबुक र ट्वीटर, खुल्यो यस्तो राज
एजेन्सी – बलिउड अभिनेत्री एेश्वर्या राय बच्चन खासै सामाजिक सञ्जालहरुमा देखिन्नन् । आजको सामाजिक सञ्जालको दुनियामा किन उनी यसबाट टाढा रहेकी छन् त ? यसको कारण भनेको उनका पति अभिशेक हुन... Read more
‘नेपाल आइडल’लमाथि परेको मुद्दा खारेज भयो…
काठमाडौं । चर्चित रियालिटी शो ‘नेपाल आइडल’विरुद्ध परेको मुद्दा खारेज भएको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौंमा परेको उक्त मुद्दामा न्यायाधीश दिवाकर भट्टको इजलासले निवेदकको दावी अपर्याप्त भन्दै रिट खा... Read more
रक्षालाइ माया दिने को-को ???
गायक प्रमोद खरेल ‘मैले भन्दा माया दिने’ भन्दै आएका छन् । उनी हालै सार्वजनिक भएको गीतमा यस्तो भन्दै आएका हुन् । रामकृष्ण महराको शब्द रहेको यो गीतमा टिका बोमजनको सङ्गीत रहेको छ । जीवन शाहीको... Read more
किन सलमान खानले बरुण धवनलाई पिट्ने धम्की दिए ???
बलिउडका सुपरस्टार सलमान खानलाई धेरैले घमण्डी तथा रिसाहा भन्ने चिन्ने गर्छन् । आफ्नो रिसकै कारण उनले विश्वसुन्दरी ऐश्वर्यालाई पनि गुमाउनुपरेको कुरा हामी सवैलाई थाहा छ । उनले रीसको झोकमा कतिबे... Read more
यी १० मुलुकका मानिसले सबैभन्दा बढी पोर्न हेर्छन्…
काठमाडौं । पोर्न वा अश्लिल चलचित्र संसारका धेरै मानिसले हेर्छन् । केही मानिसले यसलाई एउटा मनोरञ्जनको साधन मान्ने गर्छन् । कतिले यसलाई एउटा विकृतिको रूपमा हेर्ने गर्छन् । कतिपय देशमा यसले एउट... Read more
पोर्न फिल्म हेर्नेमा पाकिस्तानका महिलाहरु सबैभन्दा अगाडि…
माग्ने बुढाले किन सम्झिए गोर्खाली राजा ???
काठमाडौं । हाँस्य कलाकार केदार घिमिरे (माग्ने बुढा)ले जीवनका उतार चढावको व्याख्या गर्दै गोर्खाली राजाहरूको सम्झना गरेका छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा निक्कै समयपछि सक्रिय देखिएका छक्का पञ्जा... Read more
ऋषि कपुरलाई कुट्न संजय दत्त घरमा नै पुगेपछि…
रनवीर कपुर यतिखेर संजय दत्तको बायोपिकमा बन्न लागेको फिल्मको सुटिङमा व्यस्त रहेका छन् । तर, संजय दत्तको भने ऋषि कपुरसँग झगडा परेको थियो । ऋषि कपुरले आफ्नो अटोबायोग्राफी खुल्लम खुल्लामा केही य... Read more
संजय दत्तका ती काला दिनहरु, खोले यस्ता रहस्य…
बलिउड । हालै संजय दत्तले आफ्ना पुराना केही घटनाबारे खुलासा गरेका छन् । उनले आफु कुनै समय निकै ड्रग लिने गरेको बताएका छन् । सन् १९८१ मा संजय दत्तको पहिलो फिल्म ‘रक्की’ रिलिज भएको थियो । त्यति... Read more